किन हार्‍यो कांग्रेसले ? अब के गर्छ ? कांग्रेस नेता गगन थापासँग गरिएको लाइभ समीक्षात्मक बहस(अनिवार्य सुनाैं) - Muldhar Post
किन हार्‍यो कांग्रेसले ? अब के गर्छ ? कांग्रेस नेता गगन थापासँग गरिएको लाइभ समीक्षात्मक बहस(अनिवार्य सुनाैं)
निर्वाचन विषेश २०७४, २४ मंसिर आईतवार 463 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले शेरबहादुर देउवालाई स्वेच्छाले पार्टी सभापतिबाट विश्राम लिन र केन्द्रीय सदस्यमात्रै भएर बस्न आग्रह गरेका छन् । स्वेच्छाले जिम्मेवारी त्याग नगरे साथीहरुसँग मिलेर पार्टीभित्र हस्तक्षेप गरिने थापाले चुनौतीसमेत दिएका छन् ।